Jereo ny tanàna Santa Claus ao Rovaniemi, Failandy | Vaovao momba ny dia
Vohitra Santa Claus
Susana Garcia | | Failandy, General
Santa Claus Village dia valan-javaboary mahafinaritra any amin'ny faritr'i Lapland any Failandy. Tena akaiky an'i Rovaniemi izy io ary iray amin'ireo toerana fizahan-tany indrindra eto amin'ny firenena, indrindra amin'ny vanim-potoanan'ny Noely. Efa tamin'ny volana novambra dia voahodidin'ny motera Krismasy isika ary misy olona maro mankafy amin'ity indray mitoraka ity sy ny zavatra rehetra mifandraika amin'ireo olo-malaza tahaka an'i Santa Claus.
Andao hojerentsika izay azo atao amin'ity miavaka ity villa miorina ao Lapland, izay manomboka ny faribolana Arctic. Izy io dia ampahany misy temotra izay tsy isalasalana fa tsy mampino ho an'ny ankizy kely, fa mety ho dia tsara ho an'ny olon-dehibe koa. Jereo ny zoro miandry anao ao amin'ny tanànan'i Santa Claus.
1 Ahoana ny fomba hahatongavana any amin'ny tanàna Santa Claus
2 Miampita ny faribolana Arctic
3 Cabine Roosevelt
4 Trano Dadabe Noely
5 Biraon'ny paositra Santa Claus
6 Tontolon'ny Snowman
7 Sleigh mitaingina
Ahoana ny fomba hahatongavana any amin'ny tanàna Santa Claus
Este Ny toerana misy lohahevitra dia eo akaikin'i Rovaniemi, valo kilometatra fotsiny, ary roa kilometatra miala ny seranam-piaramanidina, ka mora azo. Tsy afaka mahazo ity seranam-piaramanidina ity ihany isika, fa matetika ny olona mijanona ao Helsinki-Vantaa. Na dia amin'ny vanim-potoana ambany aza dia tsy dia be loatra ny sidina, mandritra ny vanim-potoanan'ny Noely dia avo telo heny ireo, ka ho mora kokoa ny mahita iray. Ity zaridainam-panjakana ity koa dia mifandray amin'ny bus amin'ny tanànan'i Rovaniemi, izay ahafahanao mandeha any amin'ny tanàna hafa any Failandy amin'ny bus na lamasinina.
Miampita ny faribolana Arctic
Ity dia iray amin'ireo zavatra notetezin'ny olona hatreto fa mbola tsy napetraka ity villa misy lohahevitra ity. Amin'io fotoana io dia misy tsipika manamarika ny teboka tsy hita maso izay idirana ny faribolana Arctic. Matetika ny olona dia maka sary miampita io teboka io, satria marika izy io. Azo antoka fa iray amin'ny zavatra vitsivitsy azontsika atao any Santa Claus Village izy io, saingy efa mahazatra io ary mahatonga antsika hahatsapa amin'ny toerana tena miavaka.
Betsaka ny olona manontany tena hoe inona no ataon'ny Roosevelt Cabin amin'ity toerana ity. Ny marina dia namboarina haingana io trano io tamin'ny 1950 miarahaba ny vehivavy voalohany, Ramatoa Roosevelt tamin'izany fotoana izany, iza no tonga hijery ny fomba hanamboaran'ireo sanganasa ity toerana ity izay nofaizin'ny Ady Lehibe Faharoa. Ity tranobe ity dia metatra vitsivitsy miala ny ankehitriny ary lasa mahasarika mpizahatany izany rehefa mandeha ny fotoana. Ny kabinetra ankehitriny dia natsangana tamin'ny toerana tena ilan'ny faribolana Arctic mba hahatonga azy io ho mpizahatany sy mahaliana kokoa. Ao anatin'izany dia afaka mividy fahatsiarovana ianao ary maka sary.
Trano Dadabe Noely
Raha misy toerana izay tena manandanja amin'izany Toerana misy lohahevitra no tranon'i Dadabe Noely. Izy io dia trano iray izay tsara tarehy ety ivelany nefa koa ao anatiny. Eto no ahitantsika an'i Dadabe Noely, izay azontsika hiresahana sy fakana sary ary koa horonan-tsary. Satria tsy azo atao raha tsy izany dia mahita magazay ihany koa ianao ahafahanao mividy fahatsiarovana mahafinaritra hahatsiarovana ity fotoana mahafinaritra ity.
Biraon'ny paositra Santa Claus
Ao amin'ny tanànan'i Santa Claus dia ho hitantsika koa ilay Biraon'ny paositra Santa Claus, izay tantanan'ny Post Office Finnish. Araka ny fantatsika tsara, ny fomba hifandraisana amin'i Santa Claus hangataka fangatahana dia amin'ny alàlan'ny taratasy, noho izany ity birao ity dia manana asa betsaka mandritra ny Krismasy. Ao amin'ny birao dia misy seza lava-tànana hahafahanay manoratra ny taratasinay manokana ary mandefa izany any amin'i Dadabe Noely. Ho fanampin'izany, ho hitantsika ny taratasy vitsivitsy navelan'ny mpitsidika ary lazain'izy ireo amintsika hoe firy ny taratasy azon'i Santa Claus hatreto.
Amin'ity villa ity dia azontsika atao koa ny mankafy an'ireto fotodrafitrasa lehibe ireto. Momba ny a ranomandry sy trano fisakafoanana misy hotely misy ranomandry. Iray amin'ireo zavatra niainana iray hafa izay tsy tokony hadinontsika io, satria hahagaga ny sary sy ny fahatsiarovana. Ny fihinanana lovia salmon misy lovia mafana, fangaro tena mahazatra, dia iray amin'ireo kintana lehibe ao amin'ity trano fisakafoanana ranomandry ity. Izy ireo koa dia manana sisin-dranomandry mahafinaritra hahafinaritra. Raha afaka mijanona ao amin'ny hotely ranomandry ihany koa isika dia ho feno kokoa ny zavatra niainana.
Tahaka ny toerana rehetra ahitantsika ny lanezy, ao Santa Claus Village dia misy hetsika mahafinaritra ataonay ho an'ny fianakaviana iray manontolo. Ny iray amin'ireo malaza indrindra dia ny mitaingina mosoara milomano. Ireo fitsangantsanganana matetika dia entin'ny alika toy ny huskies sy fialam-boly mahafinaritra ho an'ny mpitsidika izy ireo. Mety hahita serfa ihany koa isika. Ireo karazana traikefa ireo dia mahatonga ity villa ity ho toerana misy temotra tanteraka izay mety amin'ny fianakaviana iray manontolo. Fitsidihana izay tsy hohadinoin'ny ankizy mihitsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Vohitra Santa Claus
London miaraka amin'ny ankizy